Atifi Mantam no yɛ Mantam 16 a ɛwɔ Ghana no mu baako. Atifi Mantam no da Atifi fam wɔ Ghana na na Mantam no ne Mantam a ɛso paa wɔ amantam 16 no mu, na ne kɛse yɛ 70,384 kilomita anaa ɔha mu nkyekyɛmu 31 wɔ Ghana nsase mu. Wɔ Bomsome a ɛtwa toɔ no da ɛtɔ so 2018 mu, wɔtee Savannah Region ne Atifi Apuei Mantam fii Atifi Mantam no ho.Mantam no kura amansin 14 na n'ahenkuro ne Tamale
Asase ne ewiem nsakrae[sesa]
Asase no sibea ne ne kɛse[sesa]
Atifi Mantam no yɛ Mantam a ɛyɛ wosee sen Ghana anafo fam esiane bɛn a ɛbɛn Sahel ne Sahara. Atifi mantam nsase no dodoɔ no ara yɛ ɛsrɛ so ne titiriw savanna, na nnua a etumi gyina ɔpɛ ano te sɛ baobabs anaa acacias wɔso pii. ɔpɛ bre no hyɛ ase fi ɔgyefo kosi ɔbenima. Osutɔ bre no hyɛ ase fi Kitawonsa bosome kosi ɔpenimma bosome no mu. Ewiem yɛ hye paa wɔ ɔpɛ bre awie na ewiem dwo fɔm wɔ osutɔbre. Mframa a ano yɛ hye bɔ fi sahara fam wɔ Ɔpɛnimma awie ne ɔgyefo ahyease.Template:Clear left
Yɛ yi fii "https://tw.wikipedia.org/w/index.php?title=Atifi_Mantam_(Ghana)&oldid=123188"
Nsesae ba kratafa yi so da 8 Kotonimma 2022, mmere 09:56.